Ulefone Power 2 vs Huawei P10, iza no handresy? | Androidsis
Ulefone Power 2, safidy ara-toekarena ho an'ny Huawei P10
Ulefone dia manolotra ny Ulefone Power 2 amin'ny vidin'ny knockdown. Ary izany ve afaka mividy azy amin'ny vidiny 171 euro ianao eto, vidiny tena manintona raha raisintsika ny toetrany teknika.
Ho an'ity, namokatra ny mpamokatra aziatika a horonantsary mampitaha ny Ulefone Power 2 amin'ny Huawei P10. Telefaona roa misy elanelam-potoana tena hafa nefa misy lafiny sasany mitovy amin'izany.
1 Ulefone Power 2 vs Huawei P10, duel an'ny titans
Ulefone Power 2 vs Huawei P10, duel an'ny titans
Hanombohana ny Huawei P10 dia manana efijery 5.1-inch ary ny famaha HD tanteraka raha ny Ulefone Power 2 dia manana efijery somary lehibe kokoa, mahatratra 5.5 santimetatra ary manana ny vahaolana mitovy amin'ny Full HD.
Na dia tsy mitovy aza ny fahasamihafana eo amin'ny sehatry ny fikirakira, satria i Huawei dia miloka amin'ny processeur HiSilicon tsara indrindra raha toa ka misafidy ny iray amin'ireo vahaolana MediaTek i Ulefone, mora kokoa ary tsy dia matanjaka, ireo terminal roa ireo dia manana RAM 4 GB sy fitehirizana anaty 64 GB.
Aiza izy Ulefone Power 2 mamafa ny mpifaninana aminy dia eo amin'ny lafiny fahaleovan-tena. Na dia manana batterie 3.200 mAh ananan'ny Huawei P10 aza ny ampy hanohanana ny fitaovana rehetra an'ity telefaona ity, ny Ulefone Power 2 dia miavaka amin'ny 6.050 mAh ananan'ny bateriny ary mampanantena fizaran-tena mahavariana.
Ary farany, hevitrao fa samy manana ny a rafitra efitrano roa. Amin'ny tranga Huawei P10, mametraka mason-droa miisa 12-megapixel izy, raha ny Ulefone Power 2 kosa manana fakantsary roa 16-megapixel aoriana. Aza adino fa ny megapixels no kely indrindra amin'izany, fa mahaliana ny mahita fa ny Ulefone Power 2 vaovao dia manana fakantsary tena tsara vidiny tsy mihoatra ny 200 euro.
Raha fintinina, raha mitady telefaona matanjaka ianao, miaraka amin'ny fizakantena tsara ary mamela anao haka sary tena tsara, indrindra amin'ny bokeh na effet blur, mandany kely, ny Ulefone Power 2 no safidy tsara indrindra hodinihina. Bebe kokoa noho izao omeo boaty telefaona, mpiaro ny efijery ary seranana rehefa mividy Ulefone Power 2 ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ulefone » Ulefone Power 2, safidy ara-toekarena ho an'ny Huawei P10
Adobe te hampiasa Artigence Intelligence hanatsarana ny selfie anao
Google dia namoaka ny Android Things Developer Preview 3